ASAN-JIOLAHY VANGAINDRANO : Tsy misy idiran’ny fonja ny tsy fandriampahalemana
Amin’ny ankapobeny dia ny vaky trano sy ny hala-botry no tena marisarisa ao anatin’ny Distrikan’i Vangaindrano. 3 décembre 2019
Ireo tranga ireo no tena mampitondra faisana ny ankamaroan’ny mponina. Araka ny fanamafisam-panazavana noentin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fonjaben’i Vangaindrano dia tsy misy idiran’ny fonja sy ireo voafonja ao an-toerana mihitsy ny trangana tsy fandriam-pahalemana misy eny anivon’ny fiarahamonina. Manao ny asany araka ny tokony ho izy ireo mpandraharahan’ny fonja ary manefa ny sazy nomena araka lalàna ihany koa ireo voafonja.
Tsy misy atahorana ny amin’ireo gadra manefa ny saziny ao am-ponja satria efa feno ny traikefa ananan’ireo tompon’andraikitry ny fonja amin’ny fiambenana sy ny fanitsiana atao azy ireo tsirairay avy. Izany hoe, tsy afaka ny hanatanteraka na handray anjara amin’ny raharaha vaky trano na halatra misy ao an-tanàna ny olona mbola mamita ny saziny ao am-ponja.
Araka izany dia manome toky ny vahoakan’i Vangaindrano ny tompon’andraikitry ny fonja ao an-toerana fa tsy misy ahiana ny amin’ireo voafonja ary milamina tsara ny fitantanana ny fonja. Nanambara ihany koa ny tenany fa mivoha midanadana ho an’ny vahoakan’i Vangaindrano ny biraon’ireo mpandraharahan’ny fonja raha misy fanazavana ilaina na fifampiresahana tiana hatao.